Vita amin'ny fomba ofisialy ny 'Scream', nizara ny sary niaraka tamin'ny "#ForWes" ny talen'ny famoahana.
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Vita amin'ny fomba ofisialy ny 'Scream', nizara ny sary miaraka amin'ny “#ForWes” ny Tale.
Vita amin'ny fomba ofisialy ny 'Scream', nizara ny sary miaraka amin'ny “#ForWes” ny Tale.
by Trey Hilburn III Jolay 7, 2021
by Trey Hilburn III Jolay 7, 2021 2,499 hevitra
niantsoantso vita ihany amin'ny farany. Taorian'ny fanajanonana maro nandritra ny fotoanan'ny COVID dia tonga ihany izahay. Vita ilay horonantsary ary nandefa ny lahatsorany tao amin'ny Twitter ny talen'ny Matt Bettinelli ary nizara sary mahafinaritra be ho fahatsiarovana ny andro tena manokana.
SCREAM (2022) dia vita! Faly be izahay fa ho hitanareo rehetra tsy ho ela. #ForWes
Bettinelli nandefa. Izaho manokana dia mbola mihetsi-po ihany amin'ny fahafatesan'i Wes Craven ary izy tsy teo akaikin'ity fidirana ao amin'ny niantsoantso franchise.
Izaho dia olona izay nihevitra hatrany fa faran'ny tarika iray rehefa miala na maty ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny tarika. Ohatra, manana tarika vitsivitsy toa anao ianao Mpanamory Tempoly vato ary AC / DC izay nitohy tamin'io anarana io ihany taorian'ny nandalovan'ireo mpihira Scott Weiland sy Bon Scott. Nandany fotoana nitadiavana izy ireo ary nony farany dia nampidina olon-kafa ho any amin'ireo mpihira mpitarika azy ireo. Avy eo manana tarika vita isika rehefa maty ny mpikambana iray. Vita. Ny tiako hambara, Beastie Boys tsy hanao akory manao tsy misy mpikambana very azy ireo. Noho izany, somary manintona ahy io. Ary azoko antoka fa tsy irery aho.
Izay rehetra nilaza, niantsoantso faly be ny mpankafy amin'ny fidirana manaraka. Tena manampy ny ekipa mitazona an'i Wes ao am-pony mandritra ny fotoana niasan'izy ireo tamin'ny sarimihetsika. Saingy, amin'ny ankapobeny, heveriko fa ireo mpankafy Scream dia vonona bebe kokoa fotsiny niantsoantso aorian'ny fiandrasana ela toy izany.
Tena manampy tokoa ireo talen'ny tarika, Bettinelli ary Tyler Gilett dia tena mahatalanjona, mahafinaritra, manetry tena. Raha toa ka olona iray izay tokony hiasa ao anatin'ny fond an'i Wes Craven's Scream dia Bettinelli sy Gillett. Ireto dudes ireto dia manana filma sarimihetsika mahafinaritra. Na ny Ready na tsia ary ny Southbound dia ohatra mamirapiratra amin'ny ahiahy sy horohoro tena lehibe miaraka amin'ny sisiny manokana.
Mahafinaritra ihany koa ny mahita kintana miverina David Arquette, Courtney Cox ary mazava ho azy Neve Campbell niverina indray. Ny tsirairay amin'izy ireo dia nahita ny script, ary nihevitra fa zavatra marani-tsaina nanome voninahitra an'i Wes Craven sy ny sanganasany.
“Mahatalanjona ireo talen-tsekoly, ataon'izy ireo tanteraka… franchise vaovao io. Valahana io, mampatahotra. Hiantsoantso vaovao fotsiny io. Tsy famerenana amin'ny laoniny, tsy famerenana indray fa fanombohana vaovao fotsiny. Heveriko fa hahafinaritra izany, ”hoy i Cox nandritra ny fotoanany Ny fampisehoana Drew Barrymore.
niantsoantso manitsaka ny diany mankao amin'ny sinema 14 Janoary 2022.
Vonona ve ianao amin'ny Wes Crevenless, Scream? Mihevitra ve ianao fa tonga ny fotoana? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Ny Addams Family 2 dia mamerina ny fianakaviana ary mitondra azy ireo hanao vakansy amin'ny masoandro. Hijery tranofiara eto.